एनआरएनएप्रति मौलाएको आशा
प्रकाशित: २०७४ मंसिर १४
न्यूयोर्क । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकामा चुनिएको नया नेतृत्वले औपचारिकता भन्दा माथि उठेर कार्य आरम्भ गरेको संकेत देखिएको छ । झण्डै एकवर्ष एनआरएनए डायस्पोरा तरंगित गरेर एनआरएनए अमेरिकामा नया नेतृत्व चुनिएको थियो । आरोप प्रत्यारोप, समुह र गुटगत विभाजन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, खिचातानी, मुद्दा मामिला सम्मको गलत अभ्यास यो विचमा भएका थिए ।
चुनावी दौरानमा भएको यहाको गलत कर्मलाई गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विश्व सम्मेलन सम्म नै सगैं लगिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् पदाधिकारीमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व शुन्य रहनु, एउटै पदमा आफु आफु विच नै प्रतिष्पर्धा गर्नु, विश्व सम्मेलनको समयमा भएका गतिविधि र आइसीसीमा मनोनित हुने सदस्य सिफारिसमा देखिएको विवादले अमेरिकी एनआरएनए कतिसम्म वेमेलको स्थितिवाट गुज्रिरहेको छ भन्ने विषयलाई चरितार्थ गरिदिएको थियो ।
यी सवै विषयलाई हेर्दा यहा चुनिएको एनआरएनए अमेरिकाको नेतृत्वले आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला भन्ने उत्सुकता आम एनआरएनए डायस्पोरामा रहेको थियो । भनिन्छ समस्या हुन्छ र त समाधान खोजिन्छ, यही समस्या भनौं या जगडिएको इगो हर्टमा आधारित अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण देखिएको यहाको समस्याका विच चुनिएको नया नेतृत्वले भने आफुलाई मुल्याकंनको कसीमा राखेर सकारात्मक दिशामा अघि वढ्न सक्नु वुद्दिमानी ठहरिनेछ । नेतृत्वमा नआउदा र आएपछि आफुलाई कुन रुपमा नेतृत्वले ढाल्न सक्छ त्यसमा नै नेतृत्वको कार्यकुशलता झल्कन्छ ।
सामाजिक संस्थामा काम गर्न जादा सगैं चुनौती पनि छ भन्ने हेक्का राखेर अघि वढ्ने नेतृत्वले मात्रै सफलता आत्मसात गर्न सक्दछ । यही पक्षलाई तराजुको कसीमा राखेर डा. केशव पौडेल नेतृत्वको एनआरएन अमेरिकाको आगामी यात्रालाई यहाको डायस्पोराले हेरिरहेको छ ।
धेरै आशंका र थोरै आशाका बीच शुरु भएको यो कार्यसमितिको यात्रा आरम्भमा गरिएका निर्णयहरुले भने केही सकारात्मक दिशा लिन खोजेको संकेत भने गरेको छ । सधैं अरुको आलोचनामा मात्रै आफ्नो विजय ठान्ने मानसिकता वाट माथि उठेर सोच्दा पछिल्लो समय एनआरएनए अमेरिकाले गरेका निर्णय प्रशंसनीय रहेको छ । हुनतः निर्णय र कार्यन्वयन पक्ष फरक हो तर सोचले कार्यन्वयनको मार्ग कोर्ने भएकाले कार्यन्वयनको लागि दवाव दिदैं साेंचको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । आंशकाको चागंमा केही आशा गर्न सक्ने आधार खडा गर्न अहिलेको कार्यसमिति जुटेको देखिएको छ ।
यो आशाका आगामी दिनहरु भने त्यति सहज हुने छैनन् । तर, एनआरएन अमेरिकाले गरेका पछिल्ला केही निर्णयहरुलाई आधार मान्ने हो भने यो संस्थाबाट आशा गर्ने सम्भावनाहरु थुप्रै छन् । संभावनालाई अवसरमा बदल्ने भनेको कार्यसमितिमा रहेको सदस्यहरुले नै हो । तर हरेक संस्थामा सदस्य सवैं एउटै शैलीका हुन्छन् भन्ने हुदैंन । सबैंको काम गर्ने तरिका एउटै हुन्छ भन्ने हुदैंन । त्यसो त सबैंले आफुलाई काम गर्नकै लागि अगाडि आएको चुनाव अघि र चुनाव पछि बताउने गरेपनि उनीहरुको सक्रियताको लेखाजोखा उनीहरुको विगत अनि वर्तमानको उर्जावाट गर्न सकिन्छ । अहिलेको एनआरएनको वर्तमान कार्यसमितिभित्र सबैं राम्रा छन् भनेर भन्न सकिदैंन ‘त्यहा पनि गफाडी’हरुको एउटा जमात जस्तोनै छ, उनीहरुको कमी छैन । कामभन्दा चर्चा धेरै खोज्नेहरुले गर्दा नै अधिकांश संस्थाहरु बदनाम हुन्छन्, त्यसैको सिकार एनआरएन पनि हो । तर, वर्तमान कार्यसमितिका केही सदस्यहरु साँच्चैको आशालाग्दा छन् । उनीहरुलाई आधार बनाएर एनआरएनए अमेरिकाको वर्तमान नेतृत्वले तय गरेका केही योजनाहरुले भने एनआरएनए अमेरिकाको कार्यसमितिले सही दिशा लिएको संकेत मिलेको छ । गर्ने अरु पनि होलान् तर यहा एनआरएनए अमेरिकाले तय गरेको केही योजना र त्यसका लागि जिम्मेवारी सहीत चुनिएका पात्रलाई केलाउदा एनआरएनए अमेरिका सही व्यक्तिमा सम्वन्धित विषयको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने दिशावाट अघि वढेको देखिएको छ ।
यसै क्रममा कार्यसमिति सदस्य टेक्ससका कृष्ण लामिछानेलाई विभिन्न १० शहरमा नेपाली पाठ्यपुस्तक सुरुवात गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नेपाली समाज टेक्ससको सभापति समेत रहेका लामिछानेको सक्रियताले उनलाई एनआरएनए अमेरिकाको बोर्डमा सजिलै निर्वाचित गरायो । त्यो नै उनीमाथिको विश्वास थियो । त्यो विश्वासलाई लामिछाने मर्न दिने छैनन् भनेर धेरैंको आशा रहेको छ ।
सधैं ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउने लामिछानेले अमेरिकाभरिका नेपाली समुदायमा नेपाली पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी केही महिनाभित्र अमेरिकाका १० ठूला शहरमा नेपाली पाठ्यपुस्तकलाई शुरुवात गर्न उनले आफ्नो काम समेत शुरु गरिसकेका छन् । चर्चाका आशक्ति भए पनि काम गरेर मात्र चर्चा बटुल्नुपर्छ भन्ने लामिछानेको विश्वास नै यो कार्यसमितिले अब केही काम गर्छ कि भन्ने आशाको एएटँ आधार हो ।
राजनीतिसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभए पनि गत निर्वाचनका रविना थापाको क्याम्पमा पुगेका डा. प्रकाश अर्यालले त्यसै चुनाव जितेका होइनन् । डा. केशव पौडेलको समुहवाट अधिकांशले चुनाव जितेको स्थितिमा डा. अर्यालले चुनाव जित्नुका कारण उनले केही काम गर्छन् कि भन्ने आशा हो । आपतकालीन कोष स्थापनाका लागि लागेका डा. अर्याल पनि काम गर्न भनेर संस्थामा आएको देखाउन उद्दत देखिन्छन् ।
त्यसैगरी मेरिल्याण्ड राज्यमा सवारीचालक अनुमती परिक्षा नेपाली भाषामा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सफल भएका एनआरएनए तत्कालीन मेरिल्याण्ड राज्य शाखाका अध्यक्ष जेदु पोखरेल पनि एक अर्को आशाका किरण हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नै जेदुलाई अमेरिकाभरिका राज्यहरुमा नेपाली भाषामा सवारीचालक अनुमति परिक्षा दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित निकायमा पहल
गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी कार्यसमितिका सदस्य गोपेन्द्र भट्टराई पनि कुराभन्दा काम गर्ने व्यक्तिका रुपमा देखिएका छन् । सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा दख्खल राख्ने भट्टराई एनआरएन परिचयपत्रलाई अविलम्ब लागू गर्न खटिएका छन् ।
नेतृत्वले कुनै पनि काम फत्ते गर्न सही पात्रलाई चुन्न सक्नुपनि जरुरी छ । हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई चुन्न सक्दा मात्रैं योजनाको कार्यन्वयन संभव रहन्छ । त्यसैक्रममा वर्तमान डा. पौडेल नेतृत्वको कार्यसमितिले सही कामका लागि चुनेको अर्को पात्र हुन् हाल मिचिगन निवासी जगनलाल श्रेष्ठ विपिन । एनआरएनए अमेरिकाको मिचिगन च्याप्टरका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठलाई खेलकुद क्षेत्रमा एनआरएनए अमेरिकाको सक्रियता वढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर संभाव्यता अध्ययन गर्दै यहा रहेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकसग समन्वय गरेर योजना वनाउने जिम्मेवारी यो समितिले दिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेपालका तेक्वान्दो खेलका पुर्व राष्ट्रिय प्रशिक्षक विपिन नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सदावाहर आइरहने नाम हो, प्रवासमा रहेर पनि नेपालको खेलकुदको विकासमा सक्रिय उनी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न तल्लीन छन् ।
योजना चुनावको लागि मात्रै होइन गर्नका लागि हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी अहिले यो समिति अघि वढेको देखिन्छ । यो पौडेलको दोस्रो कार्यकाल हो, उनलाई यसपटक गरेर देखाउनै पर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि छ । दोस्रो पटक नेतृत्वमा आउन खानु परेको हण्डर, सहनुुपरेको प्रतिष्पर्धीको तिखो वाण, चुनावी अभियानका क्रममा आलोचनाको चागंलाई नकार्न नसकेको विवशता अनि अपनाउनु परेको चुनावी तिक्डमले पौडेलले राम्रै पाठ सिकेको पछिल्लो आशलाग्दा निर्णयहरुले देखाएको छ । त्यसो त विगतको कार्यकालमा नेपाल केन्द्रीत हुदा यहा चाहेर पनि गर्न नसकेको बाध्यता गत चुनावी अभियानमा सुनाएका पौडेलले म गर्न सक्छु भनेर सिद्द गर्ने यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिएको हुनुपर्दछ । जे होस् जे भइरहेको छ यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसो त यसपटक पौडेलले आफ्ना नजिक भएकालाई मात्रै अवसर दिने आरोपलाई समेत हटाउने कोशिष गरेका छन् । चुनावी अभियानका दौरान पौडेलको प्रशंसा र उनको पक्षमा भन्दा विगतको उनको कार्यकालको कमजोरीमा टेकेर बढी कलम चलाएका टेक्ससका बाल जोशीलाई संचार संयोजक मनोनित गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यसका पछाडिका कारणवारे सौदावाजी लगायतका वजारमा अनेकन टिकाटिप्पणी भएपनि जोशीको विगतको लेखाईलाई आधार मान्दा उनी पौडेलका अन्धभक्त भने कहिल्यै देखिएका थिएनन् ।
संस्थाले गरेका हरेक गलतलाई गलत नै भन्ने आट जोशीको लेखाइले देखाउथ्यो । यही कारणनै हुन सक्छ उनी तुलनात्मक रुपमा पौडेल भन्दा अरुका नजिक मानिन्थे ।
तर, वर्तमान अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले उनलाई नै मिडिया कोर्डिनेटर नियुक्त गरेको यो निर्णयले निश्चय पनि अबका दिनका कार्यसमितिका निर्णयहरु ‘हाम्राका लागि’ भन्दा पनि ‘राम्राका लागि’ हुन्छन् भन्ने विश्वासको आधार बनाइदियो । यो समितिले एनआरएनए हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरिसकेको छ । हेल्प डेस्क समिकिो काम गर्ने क्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी, समितिको आकार लगायतका विषयमा सुधार जरुरी रहेपनि यो डेस्क आवश्यकताको एउटा पक्ष चाहि हो ।
समग्रमा एनआरएनए अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमितिले आफुलाई सही मार्गमा उभ्याएको मान्न सकिन्छ । तर यो सुरुवात मात्रै भएकाले यसलाई नै मानक ठानेर यो समिति सफल भयो भनिहाल्ने बेला चाहि भैसकेको छैन